Ukungaphumeleli: IiLebhu zeMicrosoft Adcenter kunye .NET | Martech Zone
NgoMvulo, Septemba 8, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abantu bayazibuza ukuba kutheni ndingakonwabeli ukwenziwa kweenkqubo ASP.NET. Kungenxa yokuba ngalo lonke ixesha ndisenza, ndifumana iphepha elinempazamo enje. Ndibona ukuba ngaba abantu abalungileyo Microsoft ngekhe baphuhlise ezabo izicelo ngaphandle kokwenza, ndiza kwenza njani ?! Isuka kuMicrosoft Adcenter Labs Demografics Prediction:
tags: bill@tuitivegroup.comibhlog yokupapashacinefiniiwijethi ye-facebookumbuleloIwijethi ye-twitter
Sep 9, 2008 kwi-9: 22 AM
Andiyifumani… thats a standard error page. Ungayifumana nangasiphi na isicelo (i-PHP, iRuby, nePerl, njl njl.) Kukhuseleke ngakumbi kuba ngokungafaniyo ne-PHP, ngokungagqibekanga i-ASP.NET ifihla umyalezo wemposiso ukuze ingatyhilelwanga emhlabeni kwaye indawo yakho ijolise kubaduni.
Sep 9, 2008 kwi-9: 36 AM
Unokufumana iphepha elinempazamo ngalo naliphi na iqonga, ngokuqinisekileyo u-Sameer. Isikhalazo sam kukuba yindawo ye-MICROSOFT enephutha le-MICROSOFT. Kuya kufuneka babe neentloni ngokuba babeke isicelo esineempazamo, ngenxa yokuba ingabo ababhale i-IIS kunye ne-ASP.NET.
Sep 11, 2008 kwi-9: 43 AM
Ndiyayiqonda ingongoma yakho ngoku. Uthetha ukuba le ndawo yeMicrosoft iza kutyholwa.
Kulungile inqaku lakho liyasebenza, kufuneka benze iphepha labo lesiphoso (ngumsebenzi ongenamsebenzi) kodwa ukubeka ityala ku-NET akunakuphikiswa ukutsho okuncinci. Oko kuya kufana nokuthi "Andiyithandi inkqubo kwi-PHP kuba indawo ye-PHP inephepha elinempazamo esemgangathweni"
Sep 11, 2008 kwi-11: 43 AM
Ndithathile ukumba eMicrosoft, nayo, Sameer :). Ndicinga ukuba amaphepha eempazamo kwi-IIS ngokubhekisele kwi-ASP.NET ayoyikeka! Kwezinye iilwimi, kubandakanya i-PHP, ukuba ukuphatha impazamo kuvuliwe, ndifumana iinkcukacha ngokubhekisele kwimpazamo. Kubonakala (kum) xa ndivavanya nge-ASP.NET konke endikufumanayo yile nto yokumisela.
Sep 17, 2008 kwi-11: 30 AM
Ahh kulungile ngoku ndiyakuva. Kodwa gcinani engqondweni yoyikeka kuyilo. Bazifihla ngabom umyalezo wempazamo. Kungenxa yokuba awufuni ukuba sesichengeni kwakho ukubhencwa kwihlabathi.
Into efanayo ne-ASP.NET, uyabona umfanekiso-skrini onawo? Yongeza ngokulula i-CustomErrors = kwaye iya kukunika umyalezo wempazamo ngqo.
Infact kukho iplagi kwaye udlale imodyuli yokuphatha impazamo onokuthi ubizwe ngayo Elmah endicinga ukuba intle nje, ndicebise ukuba isetyenziswe emsebenzini kwaye iyamangalisa. Kule meko unokufihla imiyalezo yempazamo kubakhenkethi besiza, kodwa iya kungena kakuhle kwaye inokusetwa ukuthumela i-imeyile ngalo lonke ixesha umyalezo omtsha wempazamo uvela. Thetha nge sweet 😉
I-PS ndiyayithanda nayo i-PHP, kodwa emva kokusebenzisa .NET iminyaka emi-2 ngokusisigxina ikhule ngokwenene kum